othisha bazofundisa emisakazweni - Ilanga News
Home Izindaba othisha bazofundisa emisakazweni
othisha bazofundisa emisakazweni
UDLALE umlabala uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal emizameni yawo yokugwema ukuchitheka kwesikhathi sokufunda, njengoba abafundi bezohlala ema-khaya isikhathi eside kwesijwayelekile ngamaholide ePhasika ngenxa yombhedukazwe kaso-mqhele (Coronavirus) ohlalise lubhojozi umhlaba wonke.
NgoMsombuluko umnyango uqale uhlelo lokufundisa ngendlela ehlukile njengoba izifundo zizozwakala oKhozini FM nasemisakazweni yomphakathi ngezikhathi ezithile.
Ukuze abafundi bahlomule kulolu hlelo, kubalulekile ukuba basondelane nomsakazo.
Okhulumela uMnyango weze-Mfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, utshele ILANGA ukuthi kuzolandwa othisha ababu-khali ezifundweni ezithile kube yibo abazofundisa emisakazweni.
Njengoba lolu hlelo luqale ngoMsombuluko, uMnu Mthethwa uthe beluzophela ngomhla ka-29 kwephezulu, kodwa seluzoqhubeka. Uthe akufuneki muntu emagcekeni esikole njengoba izwe libhekene nale nkinga.
“Njengoba kuyisikhathi esinzima kanje, ungqongqoshe (uMnu Kwazi Mshengu) uthi makubanji-swane ukuze kuthuthuke imfundo yabantwana,” kusho uMnu Mthethwa.
UMnu Mshengu ukhumbuze abafundi ukuthi njengoba usomqhele uvimbe kwasani – kwazise ngoMsombuluko uMengameli Cyril Ramaphosa umemezele ukuthi izakhamizi zaseNingizimu Afrika kuzomele zigonqe izinsuku eziwu-21, kuzophuma kuphela ezenza imisebenzi ebucayi njengamaphoyisa, izisebenzi zeze-mpilo, abakagesi nabamanzi.
Uthe leli akulona iholide lokunethezeka ngakho kumele baziba-mbe ziqine futhi balisebenzise ngenzuzo kubona abafundi, kwazise lezi zinhlelo ezenziwe zokufundisa emisakazweni ziyizindleko ezinkulu.
Umnyango uthi eziteshini zomphakathi, izifundo ziqale ngo-Msombuluko kuze kube kusasa ngoLwesihlanu phakathi kuka-09h00 no-12h00.
OKhozini FM zingo-21h00 kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, kwiGagasi FM ne-East Coast Radio kuthiwa bazokwazi-swa abalaleli ukuthi lezi zifundo zizobekwa kanjani kanti iVuma FM kuzofundwa ngo-09h00 kuya ku-15h00 ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu.
Izikole kulindeleke ukuba zivulwe emuva komgonqo wezinsuku eziwu-21 kanti uNgqongqoshe wezeMfundo eyisiSekelo, uNkk Angie Motshekga, uthe kuzoncishiswa amaholide kaNhlangulana (June).
Previous article“Abantu mabadumise uMdali emakhaya”
Next articleBakhihla esikaNandi isililo abadayisi basemigwaqweni